Nokia 7.2 na-apụtakwa ọzọ site na onyonyo egosipụtara | Androidsis
Nokia na acho ime ihe okirikiri okirikiri azumazu dika ihe anyi huru na otutu Motorola's Moto G series. Nke a ga - eme nke ọhụrụ Nokia 7.2, ngwaọrụ nke ekwuputabeghị ụbọchị mmalite ya, mana nke nwere ike ịmalite n'oge na-adịghị anya na ahịa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa gara aga, mbu mbu nke Nokia 7.2 ha gbapuru, gosiputa sistemu igwefoto a ekwuputara na ikpughe ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ gbasara aesthetics nke ọnụ. Ugbu a, anyị ejirila ụfọdụ laghachi ihe atụ ọhụrụ malitere n'oge na-adịbeghị anya dị ka achịcha na-ekpo ọkụ, ọ bụkwa ha ka anyị kwụgidere ọzọ.
Ihe atụ nke ngwaọrụ a nke anyị na-ekwu maka ohere ọhụụ a dabara nke ọma na ndị debara izu ole na ole gara aga. Ya mere, anyi na eche otu ihe, ma site na onodu di iche na echiche di iche iche.
Ka i si hụ, Nokia 7.2 na - eji igwefoto nwere okpukpu atọ mechiri emechi n'ime ụlọ okirikiri nke na - ewepụta milimita ole na ole site n'azụ azụ. N'okpuru modul ahụ, onye na-agụ akara mkpịsị aka dị ezigbo nso, ọ ga-adịkarịrị ya. Tụkwasị na nke ahụ, obere ọkpụrụkpụ ọ na-etu ọnụ gosipụtara ọzọ, yana oke akụkụ dị warara nke ọ ga-egosi.
Banyere igwefoto dị n'ihu, na panel nwere obere notch, iji were ya n'ebe ahụ n'etiti etiti ya, na nkwụsị ya.
Nokia 7.2 gosipụtara na Geekbench na 6 GB nke RAM na ụdị njirimara nke etiti
Ọ bụ ezie na a na-ekwu maka ngwaọrụ a dịka a ga - asị na ọ bụ Nokia 7.2, enwere ụfọdụ nkọwa na-egosi na enwere ike ịbụ Nokia 6.2, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ka ọ dị otu a. Mana ikwesighi iche echiche banyere ya nke ukwuu, Hlọ ọrụ HMD Global ga-eme ha ọkwa na ngosipụta teknụzụ IFA nke afọ a, nke ga-amalite na September 6 ruo September 11.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 7.2 pụtara ọzọ site na onyonyo ya